Garoowe; Soo dhaweyntii Musharax Faarax Cali Shire iyo khaladaadka dhacay -SAWIRO +VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garoowe; Soo dhaweyntii Musharax Faarax Cali Shire iyo khaladaadka dhacay -SAWIRO +VIDEO
Garoowe; Soo dhaweyntii Musharax Faarax Cali Shire iyo khaladaadka dhacay -SAWIRO +VIDEO
October 4, 2018 - By: HORSEED STAFF
Musharax Faarax Cali Jaamac ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey caasimadda Puntland ee Garoowe. Musharaxa ayaa saakey ka soo kicitimiyey magaalada Qardho oo uu ku sugnaa labadii habeen ee u danbeysey.
Dadweyne aad u fara badan ayaa Musharaxa uga hortegey banaanka Garoowe, kuwaas oo si habsami leh loo soo abaabuley marka la eego dharka ay xiran yihiin iyo sawirada ay sitaan iyo halkudhigyada ololaha doorashada.
Kadib Musharaxa ayaa shacabka Garoowe kula hadley barxadda caanka ah ee magaalada Garoowe, waxaana uu ka hadley ujeedooyinka uu u yimid Garoowe iyo aayaaha Puntland.
Faarax Cali Shire ayaa noqonaya Musharixii u horeeyey ee doorshada 2019 oo wata ciidamo gaar ah iyo hubka tiknikada ee ee caasimadda lagu soo dhaweeyo. Ololihii doorashada ee 2014 madaxweynihii xiligaas waxa uu musharixiinta u diidey in ay wataan gawaarida gaashaaman 15 Diseembar 2013 ayey ahayd markii Msuharax Shire Xaaji Faarax lagu celiyey Dangoroyo.
Soo dhawenta Musharax Faarax Cali Shire waxaa ka qaybqaatey ciidamada daraawiishta, kuwaas oo siiyey salaan sharaf isaguna uu ka qaatey salaanta, ciidanka daraawiishta ayaa Musharaxa u sheegay in ay caqdeen oo biyo ay cabbaan ugu danbeysey waagii uu Wasiirka Maaliyadda ahaa 2013. Arrintan ayaa ah fadeexad aan loo baahneyn in ay Musharixiintu ku kacaan maadaama dalka maamul ka jiro, ma jirto sabab Musharax uu salaan sharaf uga qaado ciidamada, loona isticmaalo olole doorasho baahida ciidanka daraawiishta. Marka la eego nidaamka dowliga ah ma ahayn Musharax Faarax Cali in uu yeelo in loo soo safo ciidanka oo uu salaan ka qaato, waxaana wararku sheegayaan in ay so abaabuleen arrintan qaar kamid ah kuwa hoggaanka u haya ololihiisa doorashada iyo kuwo awood ku lahaa maamulkii hore ee Puntland.
Ololaha doorashada ee sanadkan ayaa bilowdey mar aad u horeysa marka la barbardhigo doorashooyinki 2009 iyo 2014, iyada oo aan weli kalfadhigii u danbeeyey ee baarlamaanku weli furman.